Izindatshana zikaLiz Greene ku Martech Zone |
Imibhalo nge ULiz Greene
U-Liz Greene uyinja enothando, efunda umlando, i-pop culture geek evela eDolobheni elihle leMithi, eBoise, e-Idaho. Ungabamba iziphambeko zakhe zakamuva kubhulogi lakhe, I-Instant Lo.
Umphumela Omakiwe Wokuxhumana Komphakathi Kokuhlangenwe nakho Kwekhasimende
NgoMgqibelo, Ephreli 16, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 ULiz Greene
Lapho amabhizinisi eqala ukungena emhlabeni wezokuxhumana, yayisetshenziswa njengengxenye yokuthengisa umkhiqizo wabo nokwandisa ukuthengisa. Eminyakeni embalwa edlule, noma kunjalo, imithombo yezokuxhumana iye yahlangana nomphakathi owuthandayo online - indawo yokuxhumana nemikhiqizo abayithandayo, futhi okubaluleke kakhulu, ukufuna usizo lapho benezinkinga. Abathengi abaningi kunanini ngaphambili bafuna ukuxhumana nemikhiqizo ngemidiya yezenhlalo, kanye neyakho